Gaari Bam lagu tuuray magaalada Boosaaso – Bosaso Times News
Gaari Bam lagu tuuray magaalada Boosaaso
admin November 30, 2017 Gaari Bam lagu tuuray magaalada Boosaaso2017-11-30T07:08:45+00:00 Puntland No Comment
Waxaa maanta bam gacmeed lagu tuuray gaari ciidan oo marayey aaga Masjid Alraxma dhinaca bari ee magaaalada Boosaaso. Wararka waxay sheegayaan in gaariga uu ahaa gaari ay wateen ciidanka badda ee Puntland ayna ku dhaawacmeen dhawr askari iyo dad shacab ah oo meesha marayey.
Waxaa kaloo wararku sheegayaan in hal qof oo shacab ah uu dhintay isla markaana ay jiraan iskuul ku dhow goobta wax ka dhaceen ay gaartay firiro ka yimi bamka iyo xabadaha aya askartu riday.
Xaalada magaalada Boosaaso ayaa kacsan oo aan deganayn wixii ka danbeeyey dib u xirida dekedda Boosaaso iyo isqabsiga ka socda maamulka dekedda iyo lacagaha la sheegay in la soo kordhiyey ee ganacsatadu diidan tahay.
http://www.bosasotimes.com/gaari-bam-lagu-tuuray-magaalada-boosaaso/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/bosasoroad.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/08/bosasoroad-150x150.jpg 2017-11-30T07:08:45+00:00 adminPuntlandBosaso,ciidanka badda,Dekedda Boosaaso,dhaawac,SCWaxaa maanta bam gacmeed lagu tuuray gaari ciidan oo marayey aaga Masjid Alraxma dhinaca bari ee magaaalada Boosaaso. Wararka waxay sheegayaan in gaariga uu ahaa gaari ay wateen ciidanka badda ee Puntland ayna ku dhaawacmeen dhawr askari iyo dad shacab ah oo meesha marayey. Waxaa kaloo wararku sheegayaan in...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso, ciidanka badda, Dekedda Boosaaso, dhaawac, SC
« Nin ka danbeeyey xasuuqii Muslimiinta Bosnia ayaa maxkamadda Hague dhexdeeda Sun ku cabay
Donald Trump iyo UK oo qoorta iskula jira »